Anyị na-egosi gị àgwà abụọ nke igwefoto Samsung Galaxy S6 | Gam akporosis
N'oge ngosi nke ọhụụ ọhụrụ nke onye nrụpụta Korea mere ka o doo anya nke oma na Samsung Galaxy S6 igwefoto ga-abụ otu n'ime ike nke ngwaọrụ a. Samsung maara na igwefoto bụ otu n'ime njirimara ndị ọrụ jiri kpọrọ ihe nke ukwuu ma tinyezie nnukwu mkpa na ya.
na vidiyo anyị bipụtara nyochaa Samsung Galaxy S6 anyị enweela ike ịhụ ọsọ na ogo nke onyonyo enwetara na S6. Ugbu a anyị ewetara gị a Nyocha vidiyo nke abụọ n'ime àgwà kachasị mma nke igwefoto Samsung Galaxy S6.
1 Samsung Galaxy S6 nwere nyocha onyonyo anya
2 Ọnọdụ nlegharị anya AF, see foto n'ọnọdụ ọ bụla
Samsung Galaxy S6 nwere nyocha onyonyo anya
Samsung natara ọtụtụ nkatọ maka igwefoto na Samsung Galaxy S5. Ngwaọrụ nwere oghere dị elu ma nke ahụ enweghị ngwa anya oyiyi stabilization. Oge a onye nrụpụta ntị na-ege ọha na eze ntị ma tinye ọrụ a n'ime Samsung Galaxy S6. Na nsonaazụ ya enweghị ike ịpụta ọhụụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ na vidiyo ahụ, ọdịiche dị n'etiti HTC One M7 na-enweghị mgbatị onyonyo anya na Samsung Galaxy S6 bụ ihe doro anya. Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere a n'ezie ọjọọ usu, obi ike na Samsung Galaxy s6 ga-elekọta ihe niile.
Ọnọdụ nlegharị anya AF, see foto n'ọnọdụ ọ bụla
Otu n’ime nsogbu ndị a na-enwe ma e were fim ndị a na-emegharị ahụ na ha nwere nsogbu. Agbanyeghị na Samsung Galaxy S6 ị gaghị enwekwa nsogbu ahụ. Ma ọ bụ na onye nrụpụta Korea etinyela ọnọdụ nsuso AF ka ọ bụrụ na, na-akpaghị aka, oghere nke Samsung Galaxy S6 na-achụ ihe na-agagharị ka njide ahụ adịghị njọ.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, nsonaazụ ya dị egwu. Nnukwu ọrụ sitere na Samsung na igwefoto Galaxy S6. Chetakwa na gị Anya oghere F / 1.9 awade ikpọ arụmọrụ na ala ìhè ọnọdụ.
Kedu ihe ị chere banyere igwefoto Samsung Galaxy s6?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » MWC 2015: Àgwà abụọ dị egwu nke igwefoto Samsung Galaxy S6
Igwefoto ka mma nke ukwuu maka s5 mana echere m na ọ nwere ike melite ma igwefoto ka mma ga - apụta dị ka xperia z4 ma ọ bụ lg g4
Zaghachi ka nbil
Ezigbo igwefoto. Foto na mmegharị mgbe ụfọdụ. E jiri ya tụnyere nke m lumia 1020 nke a na-alaghachi afọ atọ-